अग्नि परीक्षामा ओली, पार्टीमा असन्तुष्टि ! | रुपान्तरण
अग्नि परीक्षामा ओली, पार्टीमा असन्तुष्टि !
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार १६:०९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जन–आकांक्षा अनुरुप कामगर्न मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गरेपछि पार्टी भित्रै र बाहिरी बृत्तमा पनि उनको आलोचना भएको छ । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारका प्रमुखले लोकप्रिय मन्त्रीलाई घोक्य्राएर निकालेकोमा आलोचना भएकोछ ।
मन्त्री परिषदबाट श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना बढेको छ । अहिले जसरी मन्त्रीहरु बाहिरिएका छन, त्यसले बाहिरिने मन्त्रीहरु असक्षम र अयोग्य थिए भन्ने सन्देश दिएकोछ । जुन हिसावले यसको चर्को प्रचारबाजी भएकोछ त्यसले हटाइएका मन्त्रीहरुको राजनीतिक भविष्यमै असर पर्ने देखिएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं दुइ नं प्रदेशका अध्यक्ष प्रभु शाहले सामाजिक सन्जालमा टिप्पणी गर्दै पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन भएको दावी गरेका छन । उनले लेखेका छन, ‘मन्त्री हटाउदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिष्टको मूल्य मान्यता पनि लागु गरिएको देखिएन ।
योग्यहरुलाई हटाउने र अयोग्यहरुलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो ‘महान’ कार्यले हामी फेरी एकचोटी लज्जित भएका छौं ।’ विष्टको बहिर्गमनपछि श्रममन्त्री बनेका नेकपाका सांसद रामेश्वर राय यादवका अगाडि ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री विष्टलाई हटाएकोमा नेकपाका बरिष्ठ नेता प्रदीप नेपालले चर्को विरोध गरेका छन । उनले फेसबुकमा लेखेका छन, ‘गोकर्ण विष्टको बहिर्गमनले सरकारभित्र दलाल पुँजीपति वर्गको निर्णायक पकड छ भन्ने सत्यलाई नाँगो पारेर देखाइदिएको छ ।’
पालो मिलाउन बर्हिगमन ?
बहिर्गमनपछि मन्त्री विष्टले आफनो पार्टी ठुलो भएकोले सबैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन । उनले भनेका छन ‘ठुलो पार्टी छ । धेरै साथी हुनुहुन्छ । राजनीतिमा यस्तो हुन्छ नै’ उनले भने । तर फेसबुकमा भने उनले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति व्यंग्य मिश्रित कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन । उनले लेखेका छन, ‘म जतिदिन श्रम मन्त्रीका रुपमा रहें, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेका युवाहरु, पसीनाको मूल्य नपाएका श्रमिकहरु र वेरोजगार युवाहरुको पक्षमा इमानदारीपूर्वक रानी माहुरीले जस्तै काम गर्ने प्रयास गरें ।’
पुनर्गठित मन्त्रीपरिषदमा परेका मोतिलाल दुगडलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि नेता भीम रावलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । उनको प्रश्न छ, ‘विगतमा कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो ?
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको दुरुपयोग
संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई को मन्त्री राख्ने , कहिलेसम्म राख्ने वा हटाउने अधिकार रहेको हुन्छ । यो सत्य हो मन्त्रीमा टिकिरहन प्रधानमन्त्रीको नजरमा राम्रो देखिनु पर्छ । राजनीतिमा जबसम्म एउटा प्रणाली स्थापित हुन सक्दैन तबसम्म यस खालका कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनु पर्ने निवर्तमान मन्त्री विष्टको तर्क छ ।
बाहिरिएका मन्त्रीको कार्यसम्पादन के कुरामा चित्त बुझदो पाइएन त्यसलाई अनुत्तरित नै राखिएको छ । बिहिबार साँझ नवगठित मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ मन्त्रीहरुलाई भने, ‘तपाईहरुको मूल्यांकन फागुनमा हुनेछ ।’